Iindaba -Imveliso yokunyibilikisa isinyithi esenziwe kushishino lweemoto
Iimveliso zokunyibilikisa isinyithi ezisetyenziswa kwimoto ziimveliso ezinomxholo ophezulu wezenzululwazi kunye netekhnoloji, onokuthi unciphise ubunzima bemoto kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa, kwaye unelungelo lokusebenzisa ngakumbi iimveliso zeshishini lemoto
Okwangoku, zingaphezulu kwe-400 iintlobo zamalungu e-powder metallurgy asetyenziswa kwiimoto emhlabeni.
Njengobugcisa obuqhelekileyo bokugqibela bokuvelisa ubugcisa, umgubo wokunyibilikisa umgubo uneengenelo zokonga umbane, ukonga izinto, ukhuselo lokusingqongileyo, uqoqosho, ukusebenza kakuhle kunye neminye imiba emininzi, kwaye kuye kwamkelwa ngokuthe chu ngamashishini ahlukeneyo.
Yazi kwaye isetyenziswa ngokubanzi; Ngokukodwa, isicelo kunye nophuhliso olukhawulezileyo lweemveliso zepowder metallurgy ziye zakhuthaza ishishini lokunyibilikisa umgubo kuhambo olukhawulezayo lophuhliso.
Ukuze kuphononongwe isicelo esithile kunye nophuhliso intsimbi olungumgubo yokunyibilikisa isinyithi kunye neemveliso kwishishini leemoto, intatheli yenza udliwanondlebe noNjingalwazi uHan fenglin, umcebisi omkhulu wombutho wokunyibilikisa isinyithi wobumbano lobuchwephesha base China.
I-China inamandla amakhulu okufaka isicelo kumazwe aphesheya
Unjingalwazi uHan wazisa ukuba umgubo wokunyibilikisa isinyithi usekwe kwizixhobo zokwenza umgubo wesinyithi, ezenza iimveliso zentsimbi zokwenza itekhnoloji entsha. 1940, United States
Inkampani enkulu yemoto itshintshe yonke impompo yeoyile ukuya kumgubo wokunyibilikisa isinyithi, ukusukela ngoko ukuya kumgubo wokunyibilikisa isinyithi kwathatha ingcambu kushishino lweemoto.
Ngokwedatha, ngo-2006, isiphumo esipheleleyo samalungu e-powder metallurgy e-China sasizi-78.03 yezigidi zeetoni, phakathi kwazo apho ukukhutshwa kwamalungu e-powder metallurgy kwafikelela kwi-28.877 yezigidi zeetoni.
Ngokwe-avareji yobunzima bezinto ze-PM ezisetyenziswa kwizithuthi ezilula (kubandakanya iimoto), ubunzima obumndilili bezinto ze-PM ezazisetyenziswa kwizithuthi zasekhaya yayingu-3.97 kg ngo-2006, xa kuthelekiswa nobaseJapan
8.7kg, xa kuthelekiswa ne-19.5kg eMntla Melika.Ukongeza, ishishini leemoto ngoku livulelekile kuphuhliso lwenxalenye yentsimbi yokunyibilikisa iinxalenye zesicelo, iinxalenye ngokubanzi ze-16 ~ 20 kg, eziguquguqukayo
Iindawo ezikhawulezayo zii-15 ~ 18 kg, iinxalenye ze-brake zi-8 ~ 10 kg, ezinye zi-7 ~ 9 kg.Kungabonakala ukuba i-China inamandla amakhulu okuthengisa iindawo zokupaka i-powder metallurgy.
Amalungu esinyithi somgubo anokunciphisa iindleko kunye nobunzima
Ethetha ngophuhliso kunye nemeko yangoku yemveliso yokunyibilikisa isinyithi somgubo, uNjingalwazi Han wathi iinxalenye zokunyibilikisa isinyithi ezisetyenziswa ekwenziweni kweemoto ikakhulu zineebheringi zesinyithi ezithwala ioyile kunye nemigubo
Amalungu esakhiwo sentsimbi, eyokuqala iveliswa ubukhulu becala nge-90Cu-10Sn, eyokugqibela yenziwe ngomgubo wentsimbi njengezinto ezisisiseko eziluhlaza.
Oku kulandelayo yimizekelo yokusetyenziswa kwetekhnoloji ye-PM: I-PM 64 yamazinyo akhupha amandla aqhuba izixhobo ezixabisa malunga ne-40% ngaphantsi kwezahlulo ezenziwe ngentsimbi, kwaye
Kwaye amazinyo egiya awadingi kulandelwa ngokulandelayo; Umgubo wokunyibilikisa isinyithi imoto yesixhobo sokuhambisa izixhobo, xa kuthelekiswa nemveliso yesiqhelo yendandatho yokuvumelanisa, inokunciphisa iindleko ezingama-38%;
Amandla wokugqibela wesinyithi somgubo wokudibanisa isakhelo seplanethi ngama-40% ngaphezulu kunesixhobo sokusika isinyithi, ngelixa iindleko zincitshisiwe ngaphezulu kwe-35% ...
Njengoko kunokubonwa kwezi ndidi zimbini zeenxalenye ze-PM eziye zaphumelela amabhaso ahlukeneyo, ubuncinci ezintathu zazo zenziwe ngetekhnoloji yokukhetha ukuhlangana kwaye ezimbini zazo zenziwe ngetekhnoloji eshushu yokucinezela.
Yenziwe, iindidi ezi-6 zamalungu zenziwe ngamalungu angaphezu kwama-2 ahlukeneyo, xa kudityaniswa iinxalenye zezona zininzi zinamalungu ali-18 olungumgubo wokunyibilikisa isinyithi.
Amanye amalungu awine amabhaso abonisa ukuba iinxalenye ze-PM azinakutshintsha indawo yentsimbi, iinxalenye zentsimbi, umsebenzi wokusika, ukugcina abasebenzi, izinto zokonga umbane, ukunciphisa iindleko zokuvelisa, kodwa ziyancitshiswa
Ubunzima bamalungu bulungile kubunzima bemoto. Okubaluleke ngakumbi, ukuphuculwa kwezinto zomgubo wokunyibilikisa isinyithi, kuphawulwe ukuba ezinye iindawo zinokwenziwa kuphela ngetekhnoloji yokunyibilikisa umgubo, kunye
Ukubaluleka kwezobugcisa nezoqoqosho.
Isinyithi sesinyithi itekhnoloji yokuvelisa "eluhlaza"
Okwangoku, umgubo wokunyibilikisa isinyithi ubonwa njengobuchwephesha bokuvelisa nokugcina imveliso kwishishini.Kule nkalo, uNjingalwazi Han ovela kumgubo wentsimbi osebenza ngokuzinzileyo, izinto zinokubamba
Ukuzinza, ukuzinza kwamandla, ukugcinwa kwezixhobo, ukuzinza kwendalo, ingqesho ezinzileyo, izibonelelo ezixabisekileyo kunye nezinye izinto.
Umzekelo, kwicandelo lomsebenzi ozinzileyo, umgubo wokunyibilikisa isinyithi uneqondo eliphezulu lokugqibela lokusebenzisa kunye nenqanaba lokusetyenziswa kwezinto, ezinokuthi zenze ukusetyenziswa kwamandla kuphelele.
+ Ukulungiswa okubandayo) ukulahla okanye ukwenza + ukusika ukusika ngokuthelekiswa nenkqubo yokunyibilikisa umgubo yokuvelisa icandelo elinye kuphela kufuneka lisebenzise iinkqubo ezimbalwa, linokugqibezela inkqubo ngakumbi nangakumbi
Ngokokuzinza kwezinto eziphathekayo, amandla okugqibela okwenza i-PM yeyona nto iphambili, umzekelo, ukwenza icandelo elinamazinyo, inkqubo yokusika yesiqhelo iya kuthi ga kwiipesenti ezingama-40. Izinto zokufunda ziba ziichips, kwaye iipesenti ezingama-85 zomgubo osetyenziswayo xa kusenziwa umgubo wokunyibilikisa isinyithi uveliswa kwizinto ezisetyenzisiweyo. Ilahleko yenkunkuma ngokubanzi yi-3% okanye ngaphantsi, kwaye inqanaba lokusetyenziswa kwezinto linokufikelela kuma-95%.
Ngokugcinwa kwamandla, iinkqubo zokuvelisa eziqhelekileyo zifuna ukufudumeza kunye neenkqubo zokufudumeza ukwenza ifom xa intsimbi okanye umgubo wentsimbi uveliswa yiatomization,
Kufuneka ukunyibilika kube kanye kuphela kwezinto ezilahliweyo, kwaye yonke enye into esebenzayo iyenziwa kumaqondo obushushu angaphantsi kwendawo yokunyibilika, engagcini nje ngokugcina amandla, kodwa ikwabangela umphumo wokugqibela.
Ukuthelekiswa kwenqanaba lokusetyenziswa kwentsimbi yenkqubo yokwenziwa kwezinto, kufumaniseka ukuba amandla afunekayo ekwenzeni iinxalenye zomgubo wentsimbi uyila -
Amashumi amane anesine eepesenti zeendawo ezenziwe ngomatshini.
Ngokokugcinwa kwendalo esingqongileyo, ngenxa yeempawu zamandla okugqibela okwenza umgubo wokunyibilikisa isinyithi, ngokubanzi, iinxalenye zenziwe zaba yimveliso ezigqityiweyo emva kokuntywila, ezinokupakishwa.
Ukuhanjiswa ngenqanawa, ukuhanjiswa, kwiimeko ezininzi, inani lokusika ioyile elisetyenziselwa ukuqhubekeka kweemveliso ze-PM alinakuthelekiswa nanto, kwaye isixa sezingcolisi eziyityhefu ezikhutshwe yimithombo enjengamanzi okupholisa mancinci
Ngaphantsi.Uthelekiswa nezinye iinkqubo zokuvelisa, icandelo lomgubo wokunyibilikisa isinyithi alinabungozi kwindalo.
Okwangoku, iinxalenye zomgubo wokunyibilikisa isinyithi ibe luhlobo olubalulekileyo lwamalungu asisiseko kwishishini leemoto.Kwixa elizayo, ilizwekazi laseTshayina liya kuthi ngokuthe ngcembe libe liziko lokusasaza elikhulu lomgubo wokunyibilikisa isinyithi